GS65 9SD ကို 1080p Performer လို့ ပြောနိုင်တာ ဘာကြောင့်လဲ?
MSI GS65 9SD Impression & Performance Analysis
ဗီဒီယိုဂိမ်းအလန်းတွေကို Laptop ကွန်ပျူတာနဲ့ ကစားဖို့ စိတ်ကူးနေလား? ဂိမ်းဆော့ချင်တာတော့ ဟုတ်ပါရဲ့၊ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လည်း စဥ်းစားရဦးမယ် (သိတဲ့အတိုင်း ဂိမ်းမင်းလက်တော့တွေက ဖင်ထူ အလေးကြီးဖြစ်နေကျဆိုတော့) Portable ဖြစ်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သယ်ချင်တိုင်းသယ်မယ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတာမျိုးလည်း တွေးနေတယ်ဆိုရင် ကျနော်အခု Impression လုပ်သွားမယ့် GS65 (9SD) မှာ စာဖတ်သူတွေ စိတ်ဝင်စားမယ့် အချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။
PlaneX ကိုယ်စားဖော်ပြချက် (MSI Gaming Series)
MSI မှာ GL/GF ၊ GP ၊ GE ၊ GS နဲ့ GT ဆိုပြီး စီးရီး ၆ မျိုးရှိတယ်လို့ အရင်တခါ ဆောင်းပါးမှာ ပြောသွားဖူးတဲ့အတိုင်း လိုတိုရှင်း ဆွေးနွေးရရင် အခု Impression/ Review လုပ်နေတဲ့ မော်ဒယ်က Thin & Light ခေါင်းစဥ်အောက်မှာ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ GS65 9SD ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့စီးရီးတွေကိုလည်း Unit ရရင်ရသလို သေချာ Review လုပ်ပြီး ဂဃနဏ ဖော်ပြသွားပါမယ်၊ စာသံပေသံနဲ့ ပြောရတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ အားနာပါတယ်
(ဒါပေမယ့် လိုတိုရှင်းပဲ တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ စာဖတ်သူတွေအတွက် ဗဟုသုတ ဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းရာတွေကိုပဲ ပြောသွားပါမယ်) ဒါကြောင့် Laptop Review တွေမှာ Impression တစ်ပုဒ် Review တစ်ပုဒ် စုစုပေါင်း ၂ ပုဒ် အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အခါ Showcase ၊ Highlight ဒီ ၂ မျိုးကို ဦးစားပေးသွားမှာပါ။
Stealth with many names
စနွဲရမယ်ဆိုရင်တော့ GS65 Stealth စီးရီးမှာ စျေးအသက်သာဆုံး ဖြစ်ပါတယ် (ဘယ်လောက်လဲ နောက်မှမေးပါ၊ နည်းနည်းလေး Over Price ဖြစ်သလိုခံစားရလို့ Affordable ဖြစ်တယ်လို့ သုံးရင်ပိုမှန်ပါတယ်)
ဒါကြောင့် 9SD နာမည်ကိုပါ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး MSI ရောင်းနေတဲ့ထဲမှာ 8SG ၊ 8RF အလုံးတွေလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် Naming System နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွဲကွဲပြားပြားလေး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
144Hz/3ms 15.6” Display
16GB LPDDR4 2667 MHz RAM
82 Whr Battery သုံးထားပါတယ်
Solid Performer for 1080p Gaming
စာဖတ်သူတွေလည်း သဘောပေါက်မယ် ထင်ပါတယ်၊ 9th Generation Core i7 Processor နဲ့ GTX 1660 Ti အတွဲဟာ AAA ဂိမ်းအများစုကို Native (1920 x 1080) Resolution မှာ Ultra Graphics Setting နဲ့ ကစားနိုင်တယ်။
ဆိုလိုတာ 60fps Smooth Gameplay အတွက် စွမ်းဆောင်ရည် လုံလောက်တယ်လို့ ပြောနိုင်သလို eSports Title တွေဖြစ်တဲ့ CS:GO ၊ DOTA2၊ Fortnite ၊ Apex Legends ဂိမ်းတွေကို 120fps နဲ့အထက် အသာလေး ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော့် Personal Feeling ကို ပြောကြည့်တာပေါ့။ GS65 9SD က 1.88 kg ~ 1.9 kg အလေးချိန်ပဲ ရှိတယ် (Reference: MSI) Power Supply ပါမှ 2.1 kg လောက်ပဲ ရှိတာဆိုတော့ Backpack ထဲ ထည့်ပြီး သယ်လို့ကောင်းတယ်။
RTX 2080 Max-Q Stealth သာဆိုရင် ဘယ်လောက်များ ဘဝင်မြင့်လိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်း
(နောက်တာပါ) ဒါပေမယ့်2kg အထက်က Portable ဖြစ်တယ်လို့ မခေါ်နိုင်သေးဘူး ၊ Laptop တစ်လုံးထဲ သယ်ရင်တောင် (ကြာလာရင်) လေးတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက် ဖြစ်လာတယ် But, it’s still Okay.
GS65 စီးရီးဒီဇိုင်းက Minimalist ဖြစ်တယ်၊ 15.6” Form Factor ဆိုပေမယ့် သူ့ Class မှာ တော်တော်သေးတယ် ၊ တခြား Counterpart တွေ ရှိပေမယ့် Local မှာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလို့ ပြောနိုင်တယ်။ Gaming လို့သာ နာမည်ခံထားပေမယ့် Premium ဆန်တဲ့ Laptop သုံးနေသလို ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်တယ်။
အထူးသဖြင့် Display ကို Gaming အတွက် 144Hz Refresh Rate သုံးပေးထားတယ်ဆိုမယ့် Factory Calibrate ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးထားတာ ပထမအချက်။ Dragon Center ကနေ တဆင့်သွားဖွင့်ပြီး sRGB ၊ Reading Mode ၊ Designer Colour Mode ထည့်ထားတာက Gimmick (Not really useful, Actually!)
Default အတိုင်းကို Software နဲ့စစ်လိုက်တဲ့အခါ Delta-E Color က 1.6 (နည်းလေပိုကောင်းလေ) Absolute Gamma (2.206) Maximum Brightness က 353 nits (Center) အထိရတဲ့အတွက် Generation Improve ဖြစ်လာတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
အခုလို Colour ပိုင်းမှာ ကျေနပ်စရာ ဖြစ်ပေမယ့် အားမရစရာက IPS Panel က Contrast နည်းတယ်၊ 180° Viewing Angle မှာ အရောင်မွဲမသွားပေမယ့် Display တစ်ခုလုံး မည်းထွက်သွားတယ် ၊ ဒါဟာ IPS (In-plane Switching) Panel တွေရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး တမျိုးနဲ့တမျိုးလည်း မတူကြပါဘူး။
But, One of the Best Gaming Display
GS65 9SD ရဲ့ IPS Panel ဟာ LG Philips LGD-0625 Panel ဖြစ်ပြီးတော့ ကျနော်သုံးဖူးသလောက် Gaming Laptop တွေထဲက Display အကောင်းဆုံး (Honestly) ပြောတာပါ၊ 9SD အပါဝင် Display နဲ့တင် Impress ဖြစ်တာ ၂ လုံးပဲ ရှိသေးတဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယို Editing အတွက်ပါ Recommend ပေးပါတယ်။
100% sRGB (No Please)
အခုထိ ပြောနေတာ ကျနော့် Personal တွေ ချည်းပါ၊ MSI Website မှာ ကြော်ငြာနေတဲ့ 100% sRGB က တကယ်တမ်း Coverage မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ 96% sRGB နဲ့ 61% Adobe RGB မှာ ရပ်နေပြီး Colour က မဆိုစလောက်လေး Warm ဖြစ်ပါတယ် (But, like I said, it’s Okay)
ဒါကြောင့် Professional အတွက်ဆိုရင် မရွေးစေချင်ပါဘူး။ ဓာတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယိုတွေလို High Resolution Contents ကြည့်တဲ့အခါ Colour Accurate ဖြစ်တာနဲ့ ချောမွေ့နေတာကို ခံစားရမှာပြီး Calibrate ထပ်လုပ်လိုက်ရင် Near Perfect အနေထားတစ်ခုကို ရနိုင်တယ် (But, you don’t need that, Really)
Brightness Control ပိုင်းအတွက် PWM (Pulse-width Modulation) Cycle သုံးမထားတဲ့အတွက် ဘယ် Brightness Level မှာ သုံးသုံး အမြင်အာရုံ ထိခိုက်စေတာမျိုး မဖြစ်စေပါဘူး (For Anti-glare Panel)
Display က အဲ့လောက်တောင် အရေးကြီးလား?
Gaming မလို့ တော်တော်ကောင်းတဲ့ Panel သုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။ စာဖတ်သူတွေ ကြုံဖူးလားမသိ? Display အရည်သွေးနိမ့်တဲ့ Gaming Laptop တစ်လုံးနဲ့ CS:GO ပစ်တုန်းက Cross-hair ရှာမတွေ့ (အမှန်က ရောသွားတာ) တာမျိုး ဖြစ်ဖူးပါတယ်။
Colour မှန်တာ ၊ မမှန်တာ မပြောသေးဘူး၊ Editing အတွက်ဆို ဝေလာဝေးပဲ။ အဖြူရောင် နောက်ခံပေါ် ကစားရင်း Crosshair ကျသွားတဲ့အခါ ငါရွှေ့တာ မှန်ပါရဲ့၊ ချိန်ကွင်းဘယ်ရောက်သွားတုန်း စက္ကန့်ပိုင်းလောက် တွေဝေသွားချိန်မှာ ကြုံးခံလိုက်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ Gaming Laptop မှမဟုတ် ဘာအမျိုးစားပဲဝယ်ဝယ် Display Quality ကို ဦးစားပေးပါလို့ အကြုံပြုချင်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း Display နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းရာတွေကို ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်နဲ့ ဖော်ပြသွားပါဦးမယ်။
ဒါဆိုရင် Performance ပိုင်း ဆက်သွားကြတာပေ့ါ
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းစ မပြောခင်မှာ GS65 9SD ရဲ့ Cooling Solution နဲ့ Intro ဝင်ချင်ပါတယ်။ Cooler Boost Trinity ဆိုတဲ့အတိုင်း Intelligence ပန်ကာ ၃ လုံး ထည့်ထားပါတယ်။ ပုံမှန် အတိုင်းပဲသုံးမယ်ဆိုရင် CPU ဘက်က ပန်ကာပဲ လည်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင် ၃ လုံးစလုံး လည်မယ်။
လေဝင်၊ လေထွက်အတွက် အပေါ် ၊ အောက် ၊ ဘေး Position ၃ ခု ရွေးထားပေမယ့် အများသောအားဖြင့် လေပူကို အောက်ဖက်နဲ့ ဘေးဘက်ကနေ မှုတ်ထုတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းသုံးရင်တောင် ပေါင်ပေါ်တင်သုံးလို့ အဆင်မပြေပါဘူး။
Laptop ကိုယ်ထည်က ပါးတဲ့အတွက် Cooling Solution နဲ့ အရမ်းကပ်တယ်။ အေးမြဖို့အတွက် ဆွဲထားတဲ့ Cooling ဒီဇိုင်းကကြီးတဲ့အတွက် အပူပျံ့လွယ်တယ်။ Normal Use အတွက်တောင် အခန်းအပူချိန် 28°C ထက် ပိုများနေတာ မမိုက်ဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။
ဂိမ်းကစားရင်တော့ လက်တော့ကိုယ်ထည်တဝိုက် Heat တက်လာမှာဖြစ်ပြီး ချွေးထွက်လာတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးပါတယ်။ W, A, S, D နေရာနဲ့ ညာဖက် Enter , Shift နေရာတွေမှာ အပူရှိပေမယ့် လက်တင်ဆော့လို့ရတဲ့ အခြေနေရှိတယ်။
Good Performer, but runs Hot!!!!
ပြောရမယ်ဆိုရင် ထွက်လာတဲ့အပူမှန်သမျှ ပန်ကာနဲ့ မှုတ်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုမယ့် ပျံ့နှံ့လွယ်တယ်။ ဒီ Weakness ရှိထားပေမယ့် CPU နဲ့ GPU အတွက်က အေးအေးလူးလူး ဖြစ်နေပါတယ်။ Thin & Light Gaming Laptop တစ်လုံးအတွက် အပူတက်တာ လက်ခံရပေမယ့် GS65 9SD က ဘယ်တော့မှ Over 80°C မကျော်ပါဘူး။
ဒါကလည်း Mid-range Turing ကတ်သုံးတာနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ ပြောနိုင်သလို GTX 1660 Ti သုံးထားတာချင်းအတူတူဆိုရင်တောင် MSI က Cooling ပိုမိုက်တယ် (Yes, you can say that for its Size)
Thermal ဒီဇိုင်းကလည်း 80W TGP ကတ်တွေအထိ ကိုင်တွယ်နိုင်တာဆိုတော့ သီအိုရီအရ RTX 2060 6GB ကိုပါ Temperature ကောင်းကောင်း ထိန်းနိုင်မယ်လို့ တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။
Benchmark ရလာဒ်အရ i7-9750H ဟာ Turbo Frequency ကောင်းကောင်းထိန်းပေးနိုင်တယ်၊ အကျယ်ပြောရရင်တော့ 4.5GHz (Single Core) အထိ 4.0GHz (6-cores) ခုန်တက်သွားပေမယ့် 95°C ကျော်သွားတဲ့အတွက် Throttle ဖြစ်ပြီး Comfort Zone ဖြစ်တဲ့ 73°C – 78°C Range မှာ +900 MHz (Base Clock: 2.6 GHz ထက်ပိုများတဲ့ 3.5 ~ 3.6 GHz Speed) မှာ Stable ဖြစ်ပါတယ်။
Thermal Result CPU (°C) GPU (°C)
IDLE 39 —
Prime95 95 71
Games (Witcher 3) 73 (~4GHz) 72 (~1450 MHz+)
GPU ကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း GTX 1660 Ti ဟာ များသောအားဖြင့် +1450 MHz နဲ့ Run ပါတယ် (Not bad)
Witcher3၊ Shadow of the Tomb Raider ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာ 71°C ~ 73°C လောက် အပူချိန်ရှိပြီး DOTA2(144Hz) CPU: 78°C ၊ GPU: 73°C ၊ DOTA (60Hz) CPU: 63°C ၊ GPU: 65°C ရှိတယ် (That’s desktop class temperature)
CS:GO (144Hz+) ဆော့ရင်တော့ Processor Only ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် CPU Temperature 85°C ကျော်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေ သိထားဖို့လိုတာက CS:GO 144Hz အပြည့်ကစားဖို့ CPU ပါဝါအရမ်းလိုအပ်တယ်။
ဒီလိုပဲ PUBG ဆော့မယ်ဆိုရင်လည်း CPU ကို ပိုလိုအပ်တဲ့အတွက် Core Temperature ပိုတက်တယ်။ (ဘာလို့ပိုတက်ရသလဲဆိုတာကို Graphics နည်းပညာ အကြောင်းဖော်ပြတဲ့အခါမှာ ဖော်ပြသွားပါမယ်)
အဲ့ဒါကြောင့် AAA ဂိမ်းကစားဖို့ Recommend ပေးနိုင်တဲ့ Gaming Laptop လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ Thin & Light ဖြစ်နေပေမယ့် Throttling Issue မရှိဘူး၊ Battery နဲ့ ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ Bios က Limit လုပ်ထားတဲ့အတွက် AC ပါဝါနဲ့ ဆော့တာပိုကောင်းတယ်။
ဒါပေမယ့် Normal Use အတွက် Average Temperature များနေတာကိုတော့ မကြိုက်ဘူး၊ Thermal Design က Core Temperature အတွက် အရမ်းမိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် ကြာကြာမကစားနိုင်ဘူး၊ Controller နဲ့ဆိုရင်တော့ It just fine.
Display ၊ Performance Benchmark အပိုင်းကိုတော့ In-depth Review မှာ ထပ်ပြောကြတာပေါ့
I like design but လို့ ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးက ချွေးစည်း ကပ်လွယ်တယ်၊ Fingerprint Magnet မဖြစ်ပေမယ့် Coating ကြောင့်ထင်ပါတယ် Oily Liquid ဘယ်ဟာမဆို ထင်ကျန်နေတတ်ပါတယ်။
GS65 9SD က အမြင်အားဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတာမှန်ပေမယ့် Build Quality ပိုင်းမှာ ထင်သလောက် Strong ဖြစ်မနေပါဘူး။ အထူးသဖြင့် Outer Lid က ပျော့အိအိ ဖြစ်နေသလို Power Button တဝိုက် Air Intake နေရာတွေက Weak ဖြစ်တယ်။
ကိုယ်ထည် Edge က ကိုင်လိုက်တာနဲ့ Sharp ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားရသလို မနှစ်သက်ဆုံးအချက်ကတော့ Hinge ပါပဲ။ Premium ဖက်သွားထားတဲ့ Gaming Laptop တစ်လုံးအတွက် Cheap ဖြစ်တယ်လို့ ခံစားရပြီး Strong မဖြစ်ဘူး။
180°C Flat Line လုပ်ပစ်လို့ရပေမယ့် Who Cares?
Good Steelseries Keyboard
ဂိမ်မာတစ်ယောက်အတွက် သူလက်ချောင်းထိရာ နေရာတွေက အနိုင်ရသွားနိုင်သလို အရှုံးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်တော့မှ Keyboard အရည်သွေးကို ဂိမ်းဆော့ဆော့ ၊ မဆော့ဆော့ လျှော့မစဥ်းစားပါနဲ့။
အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်ဖို့ထက် Key Positioning ၊ Key Travel နဲ့ Feedback ဒီ ၃ မျိုးက အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်နှာပြင်ကို အာရုံစိုက်နေချိန် စက္ကန့်နဲ့မလှပ် လိုအပ်ရာ Key နေရာကို လက်အမြန်ချဖို့လိုတယ်။
Clicky ဖြစ်ရင်ပိုမိုက်၊ အခု GS65 9SD ရဲ့ Steelseris Keyboard က လက်ကွက်အနေထား အားရစရာကောင်းတယ်။ အရမ်းနှစ်သက်တဲ့ထဲမပါပေမယ့် Productivity ပိုင်းအတွက်ပါ ထည့်စဥ်စားနိုင်တဲ့ အချက်မှာ ပါပါတယ်။
Perkey ရပေမယ့် Not Useful for me
Large Trackpad with Golden Edge
GS65 မှာ Personally နှစ်သက်မိတာက Outer Lid ၊ Power Button နဲ့ Touchpad နေရာမှာသုံးထားတဲ့ ရွှေရောင်အနားသတ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ထွက်လာမယ့် GS66 မှာ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီဆိုမယ့် Whatever!! ပိုက်ဆံရှိရင် Content Creation တွက် သုံးချင်တဲ့ Class ထဲမှာ စဥ်းစားထားပါတယ် (Just Imaganation)
TouchPad ဧရိယာကြီးသွားပြီဆိုပေမယ့် Windows Precision Driver နဲ့ အလုပ်လုပ်တော့ Scrolling လုပ်တာ ၊ Quad HD+ Resolution ပုံတွေကို Mouse မသုံးဘဲနဲ့ သေချာ Select မှတ်ပြီး Cropping လုပ်နိုင်တဲ့အထိ ကောင်းနေတဲ့အတွက် တကယ်အားရပါတယ်။
144Hz Panel နဲ့ဆိုတော့ ပို Smooth ဖြစ်ပြီလေး
Battery Test မှာ GS65 9SD ဟာ 1080p H.264 ဗီဒီယို ဆက်တိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၆ နာရီကျော် အသုံးခံပါတယ်။ 40% Brightness Level ၊ Wi-Fi ဖွင့်ထားပြီး Daily Use အတွက် သုံးမယ်ဆိုရင် ၈ နာရီ နီးပါး အသုံးခံတယ်။
ဘက်ထရီနဲ့ ဂိမ်းဆော့ရင် ဘာမှမထူးတဲ့အတွက် ဘာမှမပြောတော့ပါဘူး။ အဓိက 82 Whr Battery သုံးထားတာ 1.88 kg ၊ i7 Gaming Laptop တစ်လုံးအတွက် More than Enough but ပါဝါစား များပါတယ်။ Idle State မှာ 5W ကနေ 18W အထိ သုံးစွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Battery Drain မြန်မယ်။
ဂိမ်းကစားရင် 215W+ သုံးစွဲမှာဖြစ်ပေမယ့် Like I said, forget Gaming on Battery. Leave it to AC for better Performance.
Loud speakers with Shallow Bass
ပြောနေတာလေးလည်း စုံနေပြီဆိုမယ့် Audio ပိုင်း ဘယ်လိုရှိနေမလဲ? It’s good but ဘေ့စ်သံ မထွက်ပါဘူး၊ Hi-Res Audio လို့ ကြော်ငြာထားပေမယ့် What is it? A name.
Thunderbolt ၊ Type-C တွေအထိ စုံစုံလင်လင် သုံးထားပေမယ့် SD Card Reader ပါမလာပါဘူး။ ဒီဖက်ခေတ် Laptop တွေမှာ မျိုးတုံးနေပြီ ထင်တယ်၊ သိပ်မတွေ့ရတော့ဘူး။
Ugly Exhaust! Un-optimal AC Port
ဘယ်လိုပဲ လှတယ်ပြောပြော၊ သွားလေးကဖျက်၊ ရယ်လိုက်ရင် မလှလို့ ပြောသလို GS65 မှာ ရုပ်ဖျက်နေတာ ရွှေရောင်ကာလာနဲ့ မြင်နေရတဲ့ အပူစုပ်ပိုက်ကြီးတွေပါ။ GE စီးရီးတွေလို Sexy Back Ass မပိုင်ဆိုင်ထားသလို အားသွင်းဖို့ ပေးထားတဲ့နေရာက Connectivity Ports တွေနဲ့ Exhaust နေရာအကြား ကန့်လန့်လို ဖြစ်နေပါတယ်။
The GS65 9SD!!
အနှစ်ချုပ်လေး ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ GS65 9SD ကို မကြိုက်ဆုံးအချက်က စျေးပါ။ ဒေါ်လာ ၁,၈၀၀ Laptop တစ်လုံးအတွက် ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်တဲ့ Price Level ။ RTX 2060 တက်လိုက်ရင် ၁,၉၀၀ လောက်နဲ့ ရနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ဘာရွေးမလဲ?
Up to Ray Tracing ပဲ ပြောကြမှာပါ။ 2060 က Deal Breaker မဟုတ်ပေမယ့် Real-time Benchmark မှာ GTX 1660 Ti ထက် ၁၀ ကနေ ၁၅ ဆပဲ ပိုမြန်မယ်၊ DLSS ဖွင့်ကစားရင် Additional Performance ရပေမယ့် Not more than 20% လောက်ပဲ။
Confused ဖြစ်စရာက $1,800 Price tag မှာ GS65 Level နဲ့မတန်တဲ့ GTX 1660 Ti နဲ့ ရောင်းတာလဲ? GP စီးရီးတွေမှာ The Same Price ကို RTX 2060 နဲ့ ရနိုင်တဲ့အချိန် ဘာကိုရွေးမှာလဲ? သေချာတာက Display ၊ Build Quality နဲ့ Thermal Performance ပိုသာကောင်း ပိုသာပေမယ့် GP ပဲ ဝယ်ကျမှာပါ။
ဒါပေမယ့် GS Stealth ဆိုတာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း နှစ်ခြိုက်ပါတယ်။ GS60 ထွက်ကတည်းက သုံးခဲ့ဖူးသလို 65 ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ပိုမိုက်လာတယ်၊ ဘဝင်မကျဖြစ်စရာတွေက ဒီစျေး၊ ဒီတန်ဖိုးမှာ Cheap ဖြစ်နေတဲ့ Hinge ၊ Normal Use အတွက် အပူတက်လွယ်တာက ပြောစရာ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဂိမ်းအတွက် မသုံးဖူးဆိုရင်တောင် Productivity ပိုင်းအတွက် Almost Perfect အနေထားထိ ထုတ်ပေးတာက Stealth အနေထားနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ လက်ရှိသုံးနေရသလောက်ဆိုရင်လည်း Gaming Laptop သုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးရတာ နည်းပါတယ်။
ရွှေရောင် Dragon Logo နဲ့ နက်မှောင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ GS စီးရီးတွေဟာ နောက်တနည်းပြောရင် Luxury Gaming ဖက်နွယ်ထားတယ်၊ အဲ့အတွက် Elite Price နဲ့ ဝယ်ရသလို တကယ်တမ်းသုံးကြည့်တဲ့အခါ ကျေနပ်မှုတွေ ပေးစွမ်းပါတယ် (သူ့အထာနဲ့သူပေါ့)
Impression နဲ့ System Analysis Review ကို ဒီမှာပဲ ရပ်လိုက်ကြတာပေါ့၊ နောက်အပတ်မှာ In-depth Review ကို ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပြီး Dragon Army နဲ့ဆွဲမယ်၊ အခုလို Review Unit ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ MSI Myanmar ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
GS65 9SD: MSI HomePage